tranonkala ho an'ny mpisolovava fahitana: web sampan-draharaha mpisolovava
Isika no hahatratra ho anaosy miaraka aminao ny toerana izay mitovy tsara ny fangatahana.
ny maha-izy azy ny lalàna mafy tsy haka bebe kokoa noho ny sokajy ny ora vitsivitsy Ny iray amin'ireo ihany no namela ny fifandraisana amin'ny asa ny mpisolo vava dia tsy tokony ho raisina ho afa-maina Noho ny fanatitra hohanina mampifanaraka-nanao vahaolana amin'ny vidiny tsara indrindra.
ny Tranonkala sampan-draharaha ara-dalàna Torohevitra manao ny mafy nahazo ny sary tsara indrindra.
ary ny tsara indrindra azo atao ny fahitana ao amin'ny Internet. Miaraka amin'ny Tranonkala sampan-draharaha Mpisolovava. ny manao ny tranonkala ny mafy. tena fifandraisana fitaovana mamela anao mba hanitarana ny raharaham-barotra.
Maria mancuso - Mafy ny mpisolo vava tao Bruxelles, mpisolovava ny Birao mba Tubize, mpahay lalàna, lalàna, miantsena ao Bruxelles, mpahay lalàna, Lalàna sivily amin'ny Tubize
Maria MANCUSO manao ny fandalinana ny loza mety hitranga
Araka ny fahazoan-dalana azo avy amin'ny Oniversite katolika ny Louvain tamin'nyMaria MANCUSO mivantana nanapa-kevitra ny mahatonga ny olona iray ho toy ny mpahay lalàna.
miaraka amin'ny fakàna ny hevitry ny mpanjifa
ary mamaritra ny fomba fanatanterahana ny tetika na amicable fifanarahana.
mba hitondra ny mahasoa vahaolana ny olana tojo.
Ny lamin ny Mpisolovava ao amin'ny Filan-kevitry ny Fanjakana sy ny Fitsarana Ambony
Ny mpisolovava amin'ny toro-hevitra
mba hisolo tena ny litigants eo anoloan ny Filankevitry ny Fanjakana sy ny Fitsarana ambony Izy ireo no miara-mitondra eo amin'ny zato sy sy ny solombavambahoaka
mpikambana ao amin'ny Filankevi-Panjakana.
mpitsara ny Fitsarana ambony.
mivondrona mba ny tena-miasa professional
mpampianatra lalàna sy ara-dalàna ny tale. enina na fito heny isan-taona. ao amin'ny villa Hotel de Beauvais (rue François Miron - Paris).
Maimaim-poana Midinika miaraka amin'ny mpisolovava - Mpisolovava ny asa Fanompoana
Rehefa miantso antsika ho ny andalana ny ZON'OLOMBELONA, raha toa ka hahazo ny voicemail, masìna ianao, aza misalasala mba hifandray mivantana aminay ny mpisolovava milaza Ny ara-Dalàna ny VondronaMariho fa mandritra ny vanim-potoana sasany (ny fiandohan ny taona, fialan-tsasatra, reentry fitsarana, na hafa fe-potoana lehibe ny adin-tsaina), ny mpisolovava mety ho sahirana loatra ny maimaim-poana ny fizahana amin'ny toe-javatra ireo fampahafantarana hafatra ho haingana azo, vokatry ny, izay dia ny andraikitra avy hatrany mifandray amin'ny mpisolovava hafa noho ny ara-Dalàna ny Vondrona. Ankoatra izany, dia tsy manome maimaim-poana ny fifampidinihana na inona na inona an-tsoratra izay zava-dehibe amin'ny fifandirana dia kely ny filazana ny Fitsarana. Ho an'ny antontan-taratasy ireo, dia mangataka anao dolara ho an'ny ara-dalàna ny heviny momba ny finday ary dia manolotra ihany koa ny fonosana mba hanampy anao mba hanomanana araka ny tokony ho izy ny raharaha eo anatrehan'ny kely ny filazana ny Fitsarana satria ianareo tsy afaka ny ho tena ara-dalàna ny torohevitra ao amin'ity ohatra ity. Manaraka ny maimaim-poana ny fakan-kevitra, raha te-hanankina antsika ny fahefana hisolo tena ianao, ianao dia ho afaka hijery ny grid tahan'ny ny voafidy ny mpisolo vava, ary ianao dia ho afaka ny hanana topimaso amin'izay ianao dia mandoa vola isaky ny asa (la carte pricing). Ao amin'ny dingana voalohany, mifidy ny mpiara-fampanoavana ao amin'ny lisitra eo amin'ny ankavia na fikarohana ny faritra na ny mampiavaka ny lalàna, ny fikarohana fitaovana teo an-tampon'ny ny pejy. Rehetra ny mpisolovava misoratra anarana any amin'ny grid ny tahan'ny ao amin'ny sarintany izay afaka mijery ny an-tsipiriany taratasy ho an'ny mpiara-miasa tsirairay. Samy mpiara-miasa dia tsy miankina, fa mety manatona ny mpiara-miasa rehetra mba hanatanteraka ny fe-potoana, dia manana ny tombony tariffs amin'ny orinasa madinika ny tanjaky ny ekipa lehibe birao. Misy ny mpiara-miasa manaiky ny fe-potoana iasany ny Fanampiana ara-dalàna, jereo ny tsipiriany momba ny mifandray Ny ekipa ny mpisolovava amin'izao fotoana izao mitantana maro ny laha-tahiry ny fepetra iraisana (taloha action collective). Raha mieritreritra ianao hoe mety ho ao amin'ny ara-dalàna ny toe-javatra izay mihatra maro ny olona mitsidika ny manan-danja ny fizarana ny asa iombonana.
Contact - Mpisolovava ao Florence - Lorenzo Cirri
Ho misy fampahalalana fanampiny na raha maniry ny hanao fanendrena amin'ny iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny birao mpitantana, izahay-baiboly anananaoNy lalàna mafy ny Cirri dia hita ao Florence ao amin'ny distrika na manendry Campo di Martsa amin'ny rue Fitantanan. Ny orinasa no hita tamin'ny roa-polo minitra tsy maka kaonty ny fifamoivoizana mijoro. Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia ny minitra an-tongotra avy amin'ny gara Campo di Martsa.
Izany dia ilaina mba hiampita ny vavahady ao amin'ny tari-dalana ny Viale dei Mille ary avy eo indray.
Amin'ny fitateram-bahoaka avy ao amin'ny Fiantsonan'ny fiaran-dalamby Santa Maria Novella handray fiara fitateram-bahoaka ao amin'ny fitarihan ny mijanona Sabiatino. Dia nihanika teo amin'ny hampitsahatra ny Fitantanan Ny governemanta dia avy eo any kely kokoa ny arabe.
Tsy miankina fananana
Tsy misy olona mety ho tiany omena ny fananany"
Azonao atao ny hizara ny fahalalana amin'ny alalan'ny fanatsarana izany (fomba.) araka ny tolo-kevitra mifanaraka amin'izany tetikasa izanyTsy miankina amin'ny fananana ny zo hampiasa, ankafizo ary izay tiany ny zavatra ao amin'ny manokana-dalana, ny manokana sy ny tsy refesi-mandidy eo ambany ny fepetra napetraky ny lalàna. Izany dia ny fananana izay an'ny olona iray, na maromaro ny olona, na, satria ny taonjato faharoa-polo, orinasa na ny ara-dalàna hafa ny olona. Azo inoana fa ny fananana manokana tsy hita any amin'ny fiantombohan'ny fotoana Prehistoric. Izany dia azo antoka fa tsy tonga avy amin'ny Paleolithic fe-potoana hunter-gatherers.
Ity no malaza foto-kevitra na ny hevi-diso ny"faran'izay tsotra kominisma".
Ny Mesolithic fe-potoana, ny fitsipika ny fiaraha-monina ny fizarana mitohy. Amin'ny fananany manokana ny tsy maintsy hita ao amin'ny Neolithic vanim-potoana (tantsaha-pastoralists, domestication ny biby, fambolena amin'ny tany, sedentarization), angamba amin'ny voalohany ny tanàna. Douglas Avaratra, Rafitra sy ny Fiovana eo amin'ny Ara-Tantara) toerana ny voalohany dia revolisiona indostria ao amin'ny Neolithic taona. C, eo amoron ny Eofrata sy ny Tigris ao amin'ny lonaka ny Tsinambolana, miaraka amin'ny fambolena sy ny fananana manokana. Ny Fanambarana ny zon'ny olona sy ny olom-pirenena tamin'ny, ao amin'ny andininy faha-folo amby fito milaza amin'ny fananana:"Art. Ny fananana ny maha-marina inviolable sy masina, dia tsy misy azo omena raha tsy rehefa bahoaka ilaina, ara-dalàna nanamarika, ilaina mazava ho azy, ary eo ny toe-javatra iray fotsiny sy mialoha ny onitra. Fa izany dia ny fananana ny olona, fa zava-misy fa izy dia olona iray, ary tsy ny foto-kevitra, dia ny milina, ny biby izay hitany dia ny olom-pirenena manoloana ny lalàna."Ny fanambarana eran-tany ny zon'olombelona dia milaza fa"ny olona rehetra, irery ho toy izany koa eo amin'ny fiaraha-monina, dia manan-jo hanana fananana. Tsy misy mivantana tamin'ny teny frantsay ny lalàna raha tsy izany dia voafaritra amin'ny alalan'ny asa, izay manome fa fananana manokana tsy maintsy ho fonosina amin'ny rindrina roa metatra ambony ary mba ho feno fanoloran-tena ny trano sy ny outbuildings teo akaiky teo. Ny fananana sy ny fifindran'ny amin'ny lovany dia ny iray amin'ireo foto-kevitra izay nolavin'ny ny eritreritra marxists satria hita ho toy ny iray amin'ireo fototry ny tsy fitoviana ara-tsosialy. Izy manohitra ny isan'ny maty ny tompo eo ambany fitondràna teo aloha, ary ny maha-mpikambana ilay olona (ny mpanjaka) ny mpanjaka, na ho an ny tompo. Ny sasany ny vahoaka raha tsy misy fanoratana, tsy manana fananana manokana. Toy izany ny tranga 'ny mponin' ny ny nosy andaman, ny Indiana Tany an-tanin Afo (Fuégiens), ny aostraliana Aborigines. Ny hevitry ny hoe"tsy miankina ny fananana"dia tsy hita ao amin'ny fiaraha-monina nilaza fa mba ho tany am-boalohany, izay ny entana dia tsy detachable avy amin'ny olona izay, marihina fa tsy miaina toy ny olona, tsy manam-paharoa ary azo soloina izy, fa toy ny mpikambana ao interchangeable ao amin ny vondrona sôsialy izay ahitana ny olombelona saintsika (ireo maty ao anatin'izany) sy ny fananany. Na izany aza, ny olona mampiasa ny teny hoe fananana, ary ny derivative fihinanana mba hamaritana ny dingan ny fametrahana, ny famaritana ary ny famindrana ny zo ny taniny sy ny loharanon-karena dia ny fanararaotana, ampiasaina, dia ny fananana azo na rava, nifanakalo na azo avy amin'ny firaisana. Ny fampiasana ny sokajy araka ny kolontsaina, pahaizana manavaka ny tompon'ny fananana azo tsapain-tanana, sy ny tompony ny tsy fananana (Lowie), eo amin'ny fananana ny fianakaviambe na fikambanana taranak'i: ny fihazana faritra, ny zavatra, na masina ny fahalalana, sy ny fananana manokana: fitaovana, firavaka, sns (Mauss, - Godelier). Tsy, raha tsy hoe raha toa ny vondrona na ny olona manana zo ny faritany, ny fananana na ny olona, izany dia tsy entina hilazana fa afaka handrapaka ny fananana' (M.-E. Handman).
Asa - Famaritana ny ara - dalàna Rakibolana
'Manendry' ny, amin'ny zava-misy izany dia tokony hoe 'mba subpoena', midika hoe mitanisa ny olona amin'ny fitsarana. Ny fitsarana dia seised, na amin'ny fanolorana an-tsitrapo ny antoko anoloan ny mpitsara izy, na amin'ny asa, na amin'ny alalan'ny fanaterana ny mpiara-tsonia any amin'ny sekretarian'ny fitsarana, na amin'ny alalan'ny fangatahana izany na amin'ny alalan'ny fanambarana ho any amin'ny sekretarian'ny fitsarana
Ny mampiasa ny iray na ny hafa amin'ireo teny ireo dia voafehin'ny ny an-trano dingana Fehezan-dalàna, izay no mamaritra izay ireo tokony na tsy azo ampiasaina isaky ny karazana fitsarana.
Ireo karazana fomba efa mahazatra ny fitsarana ambaratonga voalohany (Fitsarana ambaratonga voalohany, Tribonaly de grande instance, ny fitsarana tao an-toerana, ny Conseil des Prud'hommes, Tribonaly parity any ambanivohitra leases sy ny Fitsarana ara-barotra. Ny Fitsarana ambony dia nisambotra amin'ny alalan'ny fanambarana samirery na amin'ny alalan'ny mpiara-tsonia sy ny, ao ny raharaha ny fitsarana mikasika ny raharaha izay amin'ny Lalàna no tsy mitaky ny hetsika ho nanolo-tena noho ny torohevitra (fomba tsy maintsy solontena), dia niforona ny fanambarana fa ny antoko na solontenan'ny, anisan'izany ny mpisolovava na ny adiresy, voasoratra mail, amin'ny rejisitry ny Fitsarana. Talohan ny Fitsarana ambony, ny antso dia ho nitoetra amin'ny alalan'ny fanambarana ao amin'ny rejisitry ny Fitsarana atao amin'ny alalan'ny Mpisolovava noho ny Toro-hevitra, na dia ny fomba anatrehan'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia tsy maintsy solontena. Ny fanendrena dia mandritra izany fotoana izany, ny mba fombafomba, ary anarana nomena ilay taratasy fa ny fitsarana bailiff dia hanafaka ny olona notendrena. Ny fitenin ny Lapam-panjakana, ny mpanao matetika mampiasa ny teny hoe 'asa', na dia rehefa ny Lalàna no manome fa ny fivoriana dia mety ho nalefa tany amin'ny paositra mailaka. Satria ny didim-panjakana 'ny valo amby roa-polo tamin'ny volana desambra, ny ataon' ny asa ny asa dia milaza ny isan'ny vaovao, raha tsy izay ny fizotran'ny dia tsy hambinina.
Ny invalidity ny asa dia tsy maintsy atolotra ny mpitsara ny Fitsarana de grande instance na ny Fitsarana izay naka ny raharaha, ary tsy hitsara, na manoro hevitra ny sata.
Na izany aza, ny sasany amin'ireo am-bava ny fizotry ny tantara tsy mahakasika ny andraikitra. Ny asa ny asa, miaraka amin'ny fanamarihana hoe"mpisolovava"arahina ny anaran ny mpisolovava, ny adiresy sy ny toetra mendrika ny lalàm-panorenana, noho izany, fa tsy misy fisalasalana momba ny maha-izy azy ny farany. Izany dia foana rehefa manao zavatra tsy ahitana fanambarana ny ara-dalàna no fototry ny fangatahana sy ny fitalahoana manaraka ny fanorenana na ny teny loatra ankapobeny dia tsy hamela ny antoko izay subpoena no jerena dia tsy afaka hamaly ny milaza ny mpangataka. Raha ny asa no namoaka amin 'ny anaran' ny maro ny mpitory teo anatrehan'ny fitsaràna, ary ny daty ny asa ny iray amin'izy ireo dia maty na tsy afaka ny tsy fahampian'ny fahafahana ny iray amin'ireo antoko ao amin'ny anaran 'izay dia natao ny asa, dia tsy misy fiantraikany ny filazana marina ataon' izany fihetsika izany, miaraka amin'ny fanajana ny hafa ny antoko eo izay ho ny asa dia tsy tapaka ny nampahafantatra. Ny bailiff iza no tompon'andraikitra amin'ny fampahafantarana ny asa dia tsy maintsy manamarina fa ny mpandray ny asa, dia domiciled tamin'ny toerana voafaritry ny tena. Ao ny tsy fisian'ny rehefa nentina nivoaka ny fampahafantarana any amin'ny toerana izay misy ny mpandray dia domiciled, ny andraikitra dia zava-poana, ary tsy, noho izany, ny fahefana. Izany dia rehefa eo anatrehan'ny Fitsarana ambony dia nampiseho tamin'ny alalan'ny taratasy fanamarinana avy amin'ny ben'ny tanàna, fa ny mpandray dia tsy domiciled amin'ny toerana izay misy ny bailiff alohan'ny niezaka hamonjy ny asa, ary avy eo, amin'ny lafiny iray hafa, noho izany dia vokatry ny teo aloha ny fikasana ny mpivory, izay ny olona dia domiciled tany ivelany. Sary vokatra dia nampiseho, ankoatra izany, fa ny toetry ny ny trano, tsy afaka mandrafitra na ny tena fonenana na ny faharoa-ponenana. Ny fanafoanana ny Fitsarana ambony, ny fanendrena dia natao mba hampihatra ireo Fitsarana ambaratonga voalohany takina amin'izay ny invalidity ny fitsarana nahatratra izany asa.
Dia tsy mety ho voasarona ao ny irregularity ny subpoena namoaka amin 'ny anaran' ny maty ny olona.
fa, izany irregularity tsy misy fiantraikany ny filazana marina ataon ny manao zavatra amin'ny fanajana ny hafa ny antoko izay anarana izany asa dia namoaka ihany koa. Farany, dia mety ho voasarona ao ny irregularity ny subpoena navoaka tamin'ny anaran'ny iray miaro olona tsy maha-olona voatondro izay misolo tena na manampy. Mankanesa ao amin'ny fanamarihana ny Madame Emilie Pecqueur AJ Fianakaviana. Ny fampahafantarana ny asa tsy vitan'ny hoe manana ny anjara asany ny handeha ho any amin'ny fitsarana.
Fifanekena ny fividianana sy fivarotana ny mizara - Templates Ohatra
Ny trano famakiam-boky ny tahirin-kevitra templates no feno indrindra misy amin'izao fotoana izao, ny Raharaham-barotra‑amin'ny‑a‑Boaty dia rakotra daholo ny zavatra ilaina ny fanoratana ny manomboka ny raharaham-barotra mandra-fahamatoranaNosoratan'ireo mpahay lalàna sy ny raharaham-barotra mpanoro-hevitra, antontan-taratasy rehetra dia ara-dalàna sy ny toetra lehibe, ary mampita ny orinasa sary narahana. Ianao koa dia afaka manana ny rivotra ny orinasa iray ao amin'ny Harena diman-jato. doc) sy mankafy izay rehetra azo atao ny fanovana ny fampiasana Microsoft Office (taona, nanomboka ny taona, XP sy), iWork, na amin'ny naorina-ao anatin'ny lahatsoratra ny mpamoaka lahatsoratra. Izany dia ampy saika mba hameno ny toerana foana mba ampanjifaina ny tahirin-kevitra. Ny faritra mila ampanjifaina dia fantatra eo amin'ny teny sy hitari-dalana anao amin'ny tahirin-kevitra tianao ny hiditra, dia toy izany no fanaovana ny rindrankajy mora ny fampiasana. Tsy afaka miantehitra amin'ny vokatra izay nipoitra Ny fanampiana foana isika vaovao ny tahirin-kevitra sy safidy vaovao mba hanomezana fahafaham-po ny fangatahana ny mpanjifa sy hivarotra ny zavatra takiana ny raharaham-barotra amin'ny tsy tapaka ny evolisiona. Antontan-taratasy rehetra misy amin'ny teny anglisy, frantsay, espaniola, sinoa, alemà, italiana, ary portiogey izy. Manao raharaham-barotra amin'ny any ivelany mpiara-miasa tsy mbola nisy toy izany mora.
Ny kaonty sy ny andraikitra ho an'ny an-trano, heloka bevava na famaizana
Ny matihanina ny nanofa kaonty dia mety hiharan'ny madio amin'ny toe-javatra maro, ary indrindra fa rehefa manao fahadisoanaFitantanam-bola-Mora antsipirihany ny manontany ny madio, sivily, heloka bevava na famaizana asa ny kaonty. Ny fifandraisana eo amin'ny kaonty sy ny mpanjifa dia fehezin'ny fifanarahana antsoina hoe ny andraikitra taratasy. Noho izany, rehefa professional ny nanofa kaonty dia ho meloka noho ny ota na ny tsirambina eo amin'ny fanatanjahan-tena ny asa nanirahana azy, dia manao ny fifanarahana sy sivily madio ny mpanjifa. Tokony, na izany aza, ny hanazavana fa matihanina kaonty matetika manana adidy ny fitaovana (ary tsy ny adidy, ny tanjona). Noho izany dia niakatra ho any amin'ny mpanjifa mba hanaporofoana ny fahadisoana na tsy fitandremana ny matihanina. Raha ny asa ho an'ny an-trano madio dia nitondra manohitra ny kaonty, ny fitsarana mankasitraka ny fitondran ny matihanina raha oharina amin'ny manam-pahaizana ara-dalàna ny fahazotoana. Rehefa ny an-trano madio dia mandray anjara, ny mpitory dia tsy afaka mangataka ny fandoavana ny onitra sy liana amin'ny fanonerana ny fitsarana an-tendrony nijaly. Na izany aza, ny andraikitra taratasy mety ahitana fepetra mametra ny madio. Ny votoatiny dia miankina amin'ny tontolo manodidina azy sy ny toetry ny asa fitoriana. Ny kaonty dia tsy maintsy, araka izany, voatery tsy maintsy misoratra anarana an-trano madio ny fiantohana fifanarahana professional, miantoka ny mety ho fatiantoka ny tokom-diman-jato, euros, fara fahakeliny, isaky ny milaza sy euros isan-taona ny fiantohana. Raha ny kaonty dia ho meloka amin'ny fandikan-dalàna izy, dia mety hahita ny heloka bevava madio incurred, na ny lehibe ny mpanoratra na ny mpiray tsikombakomba aminy. Ireto manaraka ireto dia ohatra ny fandikan-dalàna: Ny hanao ny heloka bevava madio ny kaonty, dia ilaina ny hilazana ny fitarainana ny vaomiera ny polisy na ny Fampanoavana ny Repoblika.
Ny kaonty manadino ny firaketana an-tsoratra, ny kaonty na ny fitantanam-bola ny mpanjifa ny soratra masina noforonina na diso na noforonina.
Ny kaonty mametraka an-tsitrapo, na dia manampy mba hanaovana hosoka fifandanjana lambam-pandriana, sandoka lisitra, kaonty sandoka na ny antontan-taratasy izay manompo ho toy ny fototra ho amin'ny famaritana ny hetra.
Ny kaonty dia, ao amin'io fandikan-dalàna, ny hatsaran'ny ny mpiray tsikombakomba aminy.
Mba hanafaka ny tenany, na ny fahatsapana ho meloka, dia tsy maintsy manaporofo fa manana hanatanterahana ny asa araka ny fomba fanaon'ny ny asa.
Pitsarana fanafody - Draharahan'ny Fitsarana
Ahoana no mba hampiofanana ny mpanohitra
Ny olona rehetra dia manana zo hanohitra ny fanapahan-kevitry ny fitsarana
Midika izany fa misy olona iray izay tsy afa-po amin'ny fanapaha-kevitry ny fitsarana, mba mangataka indray ny raharaha amin'ny fampiasana ny fanafody amin'ny fifandraisana ahiahy.
Isika mpanao"fanafody", dia nametraka ny fomba natao mba hamela ho bebe kokoa ny famerenana ny fitsarana ambony na ny iray fa natao ny nanohitra ny fanapahan-kevitra. Ny lalàna no mampiavaka ny olon-tsotra dia midika hoe ny fampakarana fitsarana, dia iza moa ny mpanohitra sy ny antso sy miavaka ara-dalàna ny fanafody, izay fahatelo-ny mpanohitra, ny fangatahana famerenana sy antso ao ambony. Araka ny tranga, ny admissibility ny fanafody dia mifamatotra ny toe-javatra nametraka ny Fehezan-dalàna Sivily ny fomba na ny Fehezan-dalàna momba ny paika ady heloka bevava. I - ny fanafody dia ordinairesIl ny mpanohitra sy ny antso. Inona no raharaha dia afaka manao fanoherana. Ambany ny teny ao lahatsoratra roa-polo ny Fehezan-dalàna sivily ny fomba:"ny antoko dia ho meloka amin'ny fitsarana tsy natrehiny mety rakitra iray avy amin'ny mpanohitra ao anatin'ny telo andro ny fampahafantarana ny fitsarana". Ny mpanohitra, noho izany, ny fangataham-bonjy fa ny olona iray manohitra izay efa natolotra ny fitsarana tamin'ny lasitra, izany hoe, raha mbola tsy niseho teo amin'ny fitsarana, ny re-hiditra mitovy ny fitsarana ho an'ny indray ny fitsarana. Ny fotoana voafetra dia telo andro manomboka amin'ny daty ny asa fanompoana ao amin'ny fitsarana na any an-trano, ara-barotra, ara-tsosialy sy ny heloka bevava. Fampitandremana: misy olona izay te-hanameloka ny faharoa dia ny fotoana eo amin'ny toerana misy anao dia mety tsy mamorona vaovao mpanohitra. Noho izany isika dia miresaka ny miverimberina toerana misy anao. Ny mpanohitra dia niforona tamin'ny fanambarana ao amin'ny rejisitry ny fitsarana izay namoaka ny default ny fitsarana tsy taty aoriana noho ny telo andro taorian'ny asa fanompoana voalaza io ny fitsarana, eo ambany ho faty ny inadmissibility. Ny raharaha mba ho retried izany ihany koa ny fitsarana izay namoaka ny didy amin'ny alalan'ny toerana misy anao. Ny antoko mpanohitra ho ankehitriny dia afaka manao ny fandresen-dahatra mialoha ny mpitsara izay mety na hanamarina ny fanapahan-kevitra tany am-boalohany, na ny handravana izany. °) Ny antso Raha tsy afa-po amin'ny fanapahan-kevitra nataony ny fitsarana 'mari-pahaizana voalohany', dia afaka 'ny fitsarana ambony' ary hahazo ny faharoa fitsarana ny fahamendrehan. Ny antso atao dia ny hoe fanavaozana na rescind ny fanapahan-kevitra amin'ny ambaratonga voalohany nataon'ny fitsarana. Dia ny vahaolana ho an'ny antoko tsy afa-po noho ny fanapahan-kevitra manohitra azy ao amin'ny ambaratonga voalohany, mba hanaiky ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony ny raharaha mba ho retried. Inona ny didim-pitsarana manaiky ny antso. Inona avy ireo asehon'ny ohatra voalohany ny tribunaux de grande instance sy ny fitsarana ambaratonga voalohany. Inona no fe-potoana farany ho an'ny antso.
Inona no fanapahan-kevitra mety ho vita amin'ny mpanohitra
Ao an-trano, ara-barotra sy ara-tsosialy, ny fotoana antso ho roa volana."Izy dia mihazakazaka ny andro nefa ny fitsarana, raha toa ka mifanohitra, ary, raha toa ka izany dia amin'ny alalan'ny toerana misy anao, avy ny andro ny fanoherana dia tsy ho ekena"(andininy faha-roa ny Didim-panjakana ny sivy amby roapolo aogositra).
Amin'ny resaka heloka bevava, ny fotoana ho an'ny antso dia folo andro, rehefa ny fitsarana no mifanohitra ka raha izany, ny toerana misy anao, avy ny andro ny fanoherana dia tsy ho raisina.
Ahoana no niantso manohitra izany. Ny antso dia nitoetra amin'ny alalan'ny fanambarana ao amin'ny rejisitry ny fitsarana izay namoaka ny impugned fanapahan-kevitra. Izay mety hahaliana ny fitsarana. Ny olona rehetra izay liana ao amin'ny voalohany-ohatra ny fitsarana tokony ho nofoanana na nofoanana.
Izy no ilay olona voaheloka handoa onitra sy ny tombontsoa, sy ny olona izay mandray izany, ny olona iray izay dia nahazo sazy an-tranomaizina na ny olona civilly tompon'andraikitra.
Ny fitsarana izay dia entina ny antso. Matetika teo anoloan'ny Fitsarana ambony ny fahefana ny tribonaly de grande instance, izay efa natao ny fitsarana eo ambany antso, afa-tsy zava-dehibe ny lalàna ara-pomba aiza ny fitsarana ambony fitsarana dia ny tribonaly de grande instance any amin'ny fahefana ny fitsarana ambaratonga voalohany. Inona no vokatry ny antso. Ny antso dia suspensive, raha tsy hoe ny fitsarana pronounces iray vonjimaika ny fampiharana ny lalàna amin'ny toe-javatra izay azo atao.
Ny antso dia dévolutif.
Inona no fanapahan-kevitra mety ho vita amin'ny antso. Ny fitsarana eo ambany antso mety ho ny hanafoanana raha misy ny fanitsakitsahana ny lalàna, ary ao amin'ity tranga ity, ny fitsarana ambony dia afaka ny hihaino sy hanapa-kevitra hevitra indray.
Tsy afaka manamarina na dia manafoana ny nanohitra ny fanapahan-kevitra.
Tena miavaka ara-dalàna ny fanafody. Fanintelony izao no mpanohitra, ny fitsarana ambony ao ambony sy ny famerenana fitsarana. °) Ny antoko fahatelo ny fanoherana. Izany no ala nenina ahafahan'ny olona izay efa sady tsy nisy ny antoko na efa nisolo tena ny hanaovana ilay fandidiana mba hanafika ny fitsarana fa ny fitsarana an-tendrony. Eo ambanin'ny teny ny andininy faha- ny fehezan-dalàna sivily ny fomba,"na antoko mety ho ivon-toerana antoko fahatelo-ho amin'ny fitsarana, fa manohintohina ny zony ary rehefa izay na izy na ireo dia maneho ireo dia tsy antsoina hoe". Ambany ny teny ao lahatsoratra roa-polo ny Fehezan-dalàna sivily ny fomba:"ny antoko dia ho meloka amin'ny fitsarana tsy natrehiny mety rakitra iray avy amin'ny mpanohitra ao anatin'ny telo andro ny fampahafantarana ny fitsarana". Ny mpanohitra, noho izany, ny fangataham-bonjy fa ny olona iray manohitra izay efa natolotra ny fitsarana tamin'ny lasitra, izany hoe, raha mbola tsy niseho teo amin'ny fitsarana, ny re-hiditra mitovy ny fitsarana ho an'ny indray ny fitsarana. Ny fotoana voafetra dia telo andro manomboka amin'ny daty ny asa fanompoana ao amin'ny fitsarana na any an-trano, ara-barotra, ara-tsosialy sy ny heloka bevava. Manoloana izay fahefana nomena ny antoko fahatelo. Izany no natao mialoha ny fitsarana izay efa nanambara ny fitsarana voakasik'izany sy ny fanapahan-kevitra dia mety ho nataony toy izany koa ny mpitsara. Ny zavatra potoana dia afaka ataontsika antoko fahatelo fanoherana. Amin ny fitsipika, ny fe-potoana dia telo-polo taona ny andro fitsarana. Izany fahatarana izany no manazava ny ny zava-misy fa tamin'ny mikasika ny raharaha, ny fitsarana tsy ho nampahafantarina ny antoko, dia mety tsy ho fantatra fa nandritra ny fotoana ela taorian'ny.
°) Ny fitsarana ambony ao ambony.
Raha tsy afa-po amin'ny fanapahan-kevitra nataony ny fitsarana ao amin'ny ambaratonga faharoa, dia afaka ihany koa ny zava-tsarotra izany fanapahan-kevitra amin'ny fananganana ny antso any ambony. Ny antso dia mikendry ny censure ny Fitsarana Tampony, ny non-fanarahana ny amin ny fitsarana ny fanjakana tan-dalàna. Ny Fitsarana no tsy re-mpitsara tsy mampaninona, fa ny mandinika ny tsy tapaka ny fitsipi-dalàna ampiharina ary ny amin'ny raharaha ambony, manondro ny raharaha ny fitsarana ambony izay atolotra ny fitsarana nanafika, fa raha tsy izany dia ahitana. Inona avy no fepetra momba ny antso any ambony. Amin'ny resaka heloka bevava, dia mety ho ny foto-kevitry ny fitsarana ambony ao ambony mialoha ny efi-pitsarana ny Fitsarana Tampony, ny fitsarana sy ny didy nadika amin'ny ala nenina farany ny fitsarana ambony ny fitsarana efi-trano, sy ny assize fitsarana.
Ny fe-potoana ambony dia dimy andro raha ny fanapahan-kevitra nanafika dia mifanohitra ary rehefa izany, dia amin'ny alalan'ny toerana misy anao, raha ny mpanohitra dia tsy raisina.
Ny fanambarana ny antso tsy maintsy atao amin'ny rejisitry ny fitsarana izay efa nataony nanohitra ny fanapahan-kevitra na ny mpivarotra ny fitsarana ny trano fonenana ny mpitory ao amin'ny fitsarana ambony. Izany dia tsy maintsy voasonian'ny tsoratry sy ny mpangataka ao ambony ny tenany, na amin ny fampanoavana - mpisolovava na ny mpisolovava-tany manokana. Talohan'ny fitsarana izay efa nitondra ny antso any ambony. Ao amin'ny foto-kevitra rehetra, afa-tsy amin'ny zavatra izay mahakasika ny raharaham-barotra ny lalàna, izay misy ny Mahazatra ny Fitsarana sy ny Fanelanelanana (CCAY) no hany fahefana eo amin'ny raharaha ambony, ny fitsarana ambony ao ambony dia entina eo anoloan ny efi-pitsarana ny Fitsarana Tampony. Ahoana no namorona ny antso amin'ny sivily, sosialy sy nentim-paharazana. Izany dia atao eo ambany fanamelohana ho faty ny inadmissibility, amin'ny alalan'ny voasoratra fangatahana sy nanao sonia ny antoko, ny mpisolovava, na mpisolo vava hery manokana ao anatin'ny fe-potoana iray volana, izay mikoriana avy ny daty maha-zava-dehibe ny fanapahan-kevitra, rehefa natao izany eo amin'ny olona, na ao an-trano, sy ny andro ny fanoherana dia tsy ekena, rehefa tonga any amin'ny fitsarana ny toerana misy anao.
Misy antso ho fitoriana ny clerk ny fitsarana izay efa nataony nanohitra ny fanapahan-kevitra.
Tsara homarihina fa ny ambony ambony dia tsy suspensive amin'ny zavatra izay mahakasika ny sata manokana ny diso zava-nitranga ny fisoratana anarana ny tany, na rehefa ny fividianana na famindrana ny fananana dia efa hita amin'ny fomba porofo napetraky ny lalàna momba ny ady amin'ny saha rehefa atsangana hitondra ny didim-pitsarana dia mihoatra ny folo tapitrisa (.) ariary CFA, na aiza ny fanomezana ny lalàna. Inona no fanapahan-kevitra dia afaka ho nentina tany amin'ny Fitsarana Tampony. Rehefa ny Fitsarana dia nandray ny antso, ny fialan-tsasatra na annuls ny nanohitra ny fanapahan-kevitra raha ny fanitsakitsahana ny lalàna.
Amin'ity tranga ity, dia manondro ny raharaha hafa fitsarana toy izany koa ny sehatra, na eo anatrehan'ny fitsarana izay atolotra ny fitsarana, fa raha tsy izany ahitana na dia mandà ny antso rehefa tsy misy ny fanitsakitsahana ny lalàna.
Rehefa ny fitsarana nasionaly no tsy manao ny fitsarana mifanaraka amin'ny hevitry ny lalàna dia nanapa-kevitra ny fitsarana, ny fitsarana dia fitsipika ao amin'ny efi-trano mba hanorim-ponenana tena raikitra ny fifamaliana.
°) Ny fangatahana famerenana.
Izany dia midika hoe ny antso manohitra ny afa-jaza ny rariny izay, raha ny zava-misy, hita ihany rehefa ny fanapahan-kevitra dia lasa hentitra no tsy miovaova.
Dia misy ao an-trano sy ny ady heloka ny raharaha.
Nialoha izay dia nitondra ny fangatahana famerenana.
Ao ny raharaha sivily, ara-pitsarana famerenana dia nentina teo anoloan ny mpitsara izay namoaka ilay nanohitra ny fanapahan-kevitra, fa tsy izany, indrindra indrindra, rehefa manova ny fanapahan-kevitra voalohany dia gaga, tamin'ny alalan'ny hosoka, na dia mifototra amin'ny sandoka vola madinika. Amin'ny resaka heloka bevava, ny lalàna famerenana dia nentina teo anoloan ny efi-pitsarana ny Fitsarana Tampony, izay mandinika raha misy vaovao tena marina dia tsy fantatra ny fitsarana amin'ny andro fitsarana, ny natiora mba hahatonga fisalasalana eo amin'ny fahamelohana ny nanameloka. Iza no afaka mangataka amin'ny fitsarana ny famerenana. Amin ny fitsipika, ny olona rehetra izay manana liana, anisan'izany ny mpandova ny voaheloka ny olona, ary ny mpampanoa lalàna.
Tsy miankina mpitsabo manam-Pahaizana manokana izay miasa ho toy ny mpitsabo manam-pahaizana manokana
Misy olona voan'ny fahavoazana ho azy ara-batana na ara-tsaina, toy ny vokatry ny loza na ny aretina(s), sy izay tsy maintsy, mba ho indemnified, na ny filazana ny zo, mba ho fanombanana amin'ny alalan'ny fahaizana ara-pitsaboanaIsan-taona, any Belzika, an-jatony maro ireo olona niharam-boina ny amin'ny loza miteraka ratra sy aorian'ny-vokatry mihoatra na latsaka lehibe: fanampin'izany, an'aliny ireo marary ao amin'ny fangatahana, ary izany dia tsy fahita firy, ao ny tsy fitovian-kevitra ara-pitsaboana amin'ny andrim-panjakana ara-tsosialy (Fiaraha-mientana ifampizarana fiantohana, INAMI, Fanompoana ny Kilemaina, ny Asa Aretina Tahirim-bola, Bola ny Fitsaboana ny Loza). Ny mampahafantatra ny rehetra niharam-boina ny zo ho voaro ny momba ny drafitry ny fitsaboana ny fanombanana manokana ny ratra sy ny hafa manana kilema, araka ny mpitsabo manam-pahaizana manokana filan-kevitra, antsoina ihany koa hoe dokotera ny fampiasana, izay manana safidy malalaka. Toa fanabeazana fototra, saingy noho ny tsy fahampiam-baovao, tsy dia mahazatra ny mahita ireo niharam-boina tsy misy dokotera birao madio Ao Frantsa, ny lalàna"antsoina hoe Badinter", dia mitaky ny fiantohana ny orinasa mba hampandre misy niharam-boina ity zo fototra amin'ny alalan'ny vata tsara hita maso. Indrisy anefa fa, izany dia tsy mbola mitranga amintsika, izay tsy mamela ny niharam-boina ny sasany zava-dehibe ny vaovao Izany dia zava-dehibe mba hiarovana ny tombontsoan'ny rehetra niharam-boina ny loza, satria ireo no manohitra ireo orinasa fiantohana dia tsy maintsy indemnify azy. Mba ho afaka ho ao amin'ny egalitarian fifandraisana, izany hoe, ny"sehatra ny filalaovana ny"na inona na inona fomba, dia afaka milaza fa izany no ilaina. Amin'ny teny hafa, izany no tsy manaiky ny fahaizany araka ny vitan'ny dokotera ny fiantohana ny orinasa Haingana araka izay azo atao, ny niharam-boina dia tsy maintsy mampiasa ny mpitsabo manam-pahaizana manokana, fotsiny-tsy ny nanao vivery ny manan-danja eo ambany-fanombanana ny ratra. Ity fitsipika ity dia marina ihany koa ny filazana ny zon'ny marary ny fifandirana momba ny fitsaboana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny ara-tsosialy ny fikambanana. Raha ny tena izy, tena vitsy ireo niharam-boina araka ny tokony ho izy sy araka ny tokony ho izy nampahafantarina ny paika arahina amin'ny medico-ara-dalàna aorian'ny loza. Noho izany, rehefa tapaka nampiantso ny biraon'ny mpitsabo iray ny fiantohana ny orinasa izay manana ny indemnify azy ireo, indrindra ny mandeha any, raha tsy misy fanampiana, ary raha tsy naka ny hevitry ny dokotera manam-pahaizana, satria tsy manana. Matetika loatra, indrisy, izany, koa, eo amin'ny fototry ny ity tokana sy tsy manam-paharoa fahaizana ara-pitsaboana samirery atao amin'ny fangatahana sy ny ara-pitsaboana iray ny orinasa fiantohana izany dia tsy maintsy mandoa, izay kajiana ny tambin-karama, izay tsy ara-drariny.
Ny fifanarahana findramam-bola
Azonao atao ny hizara ny fahalalana amin'ny alalan'ny fanatsarana izany (fomba.) araka ny tolo-kevitra mifanaraka amin'izany tetikasa izany
Ny findramam-bola dia"ny fivoriambe generic - izay ny findramam-bola ho an'ny fampiasana sy ny findramam-bola ho an'ny fandaniana ireo karazana roa - hatsaran-toetra izay mampisambotra no hanolotra ny zavatra izay misambotra, mba ho azo ampiasaina, ny foto-kevitra mba ho famerenana amin'ny laoniny".
Ny sivily Fehezan-dalàna, ao ny lahatsoratra, mampiavaka ny vonona ampiasaina sy ny findramam-bola ho an'ny fandaniana (tsy tokony hafangaro amin'ny mpanjifa ny findramam-bola izay mamela anao mba hisambotra vola ny vola izay ampiasaina fotsiny ho an'ny fandaniana). Ny vonona ampiasaina, izay mety ho hita ao amin'ny fizarana faha- ny sivily Fehezan-dalàna, dia ahafahana mampiasa ny zavatra tsy fandringanana taorian'izay, ary izay misambotra dia ho takiana mba hamerina ny zavatra nampindrana. Ny findramam-bola ho an'ny fandaniana, napetraky ny lahatsoratra ny sivily Fehezan-dalàna, ao kosa, dia mifantoka amin'ny zavatra iray izay dia ho rava (antsoina koa hoe 'itarina'). Ao amin'ny Fehezan-dalàna sivily, ny findramam-bola dia maimaim-poana ny fanompoana izay raha ny marina dia toa tsotra ny fanompoana ny namana, afa-tsy ny raharaha ny findramam-bola ho an'ny fandaniana (satria izany dia amin'ny fananana-azo itarina, izany dia ho lafo dia lafo ny ankamaroan ny fotoana). Mazava ho azy, rehetra fampindramam-bola ho an'ny fandaniana dia tsy ho lafo. Ara-poto-kevitra, ny findramam-bola, fifanarahana dia samirery fifanekena: ny mampisambotra dia maimaim-poana, dia mety hanapa-kevitra hanemotra ny zavatra, na tsy. Araka Duraton, 'roa ireo fifanarahana manana izany amin'ny mahazatra, fa, ankoatra ny fanekena takiana amin'ny rehetra fifanarahana, amin'ny hitolo-batana ny zavatra dia ilaina ny fisian' izany.
Koa ny'appelle-t-on an'ny tena io fifanarahana, ao amin ny fotopampianarana.
Fa ny ampahany amin ny fotopampianarana disadisa tena io fifanarahana sy mahita izany ho toy ny consensual fifanarahana ny indenture. Miresaka ihany koa isika ny fandoavam-bola, rehefa samy mandray soa manohitra ny fanoloran-tena. Ity toko ity dia mifandray amin'ny fitsarana ny Sivily Voalohany Efi-trano momba ny Cour de ambony, valo amby roa-polo martsa. Amin'ity tranga ity, noho ny findramam-bola toy ny fanomezana avy amin'ny matihanina, ny olona iray nahazo ny toeram-piompiana ireo fitaovana. Ny findramam-bola, fifanarahana voalaza fa ny mampisambotra tokony aloa mivantana amin'ny mpivarotra ny habetsaky ny findramam-bola rehefa avy nampahafantatra azy ny fanomezana ny fitaovana ary raha ny misambotra efa nalaina avy amin'ny fiainana fiantohana. Ny misambo-bola dia tanteraka ny toe-javatra rehetra ilaina ho amin'ny fanomezana ny findramam-bola, ary, indrindra indrindra, ny fividianana ny fiainana fiantohana, fa maty telo volana aorian'ny. Ny mpivarotra mandefa mba mampisambotra ny fanaterana ny fitaovana. Ny mpandova ny misambotra manendry ny matihanina, fa efa nahazo ny bola, ny fandoavana ny vola ny findramam-bola. Ny Fitsarana Ambony ny Grenoble dia mitondra ny lohateny hoe ny fangatahana. Ny matihanina mampisambotra avy eo dia endriky ny antso sy ny alleges fa ny fitsaran ny Fitsarana Ambony natao ny fa ny findramam-bola, fifanarahana dia niforona, avy eo ny tsy fahampian'ny delivery ny vola, ny farany satria ny tena toetra amam-panahy, dia tsy niforona. Ny Fitsarana tampony dia tsy maintsy mamaly ny fanontaniana manaraka izao: Ny findramam-bola ny amin'ny vola, raha toa amin'ny alalan'ny professional ny bola dia-izany no tena kanto, na consensual.
Ny Fitsarana Avo nitsipaka ny antso an-tany fa ny findramam-bola dia atao amin'ny matihanina ny bola dia tsy tena misy ny fifanekena.
Izy manao eto ny nanova ny fiainako raha oharina ny nametraka tranga-lalàna izay dia nilaza fa findramam-bola ho an'ny fandaniana, ny fifanarahana, sy ny tena, dia afaka ihany no ho tratra amin'ny alalan'ny fanaterana ny zavatra nampindrana ny misambo-bola mihitsy na antoko fahatelo izay mandray ny tantaran ny misambo-bola.
Ny voalohany pejy ity fitsipika ity dia voakasiky ny sasany karazana findramam-bola:"fampindramam-bola fehezin'ny lahatsoratra L- ary manaraka ny mpanjifa fehezan-dalàna tsy manana ny maha tena misy ny fifanarahana".
Ary ao amin ny toeram naneho hevitra, ny fitsipika indray deflected ny fifanarahana ny findramam-bola ny vola niditra tao amin'ny carte matihanina. Toy ny na inona na inona tsara ara-dalàna ny fampandrosoana, misy fepetra ny vola sy ny toe-javatra ny endrika mba ho afaka ny ho mendrika ny fifanarahana findramam-bola, fifanarahana.
Momba ny findramam-bola ampiasaina, izany dia ilaina ny fananana (mety ho fanaka na trano) dia tsy consumable ary hita ao ny varotra.
Ity karazana findramam-bola tsy mitaky fa ny fananana ho an'ny fananana ny mampisambotra. Momba ny findramam-bola ny fandaniana, dia mitaky fotoana izao ny consumable entana (zavatra toy ny fiarovana ny fananan-tany izay disparaitraient avy amin'ny fampiasana voalohany dia zara raha azo atao). Ny drafitry ny fifanarahana translatifs fanananao dia ho azo ampiharina.
Ny fifanarahana dia ho tapa-kevitra, indrindra indrindra ny momba ny mety ho fiheverana raha liana dia ao amin'ny lalao. Ny findramam-bola ho an'ny fampiasana dia tena fifanekena Raha ny tsininy fampisehoana, ny manimba sy ny tombontsoa ho azo atao.
Ny findramam-bola ny mpanjifa amin'ny ankapobeny consensual (izany dia ho masina raha toa ka dia tonga saina teo amin'ny mpivarotra sy ny bola ny mpanjifa).
Ny tatitra momba ny porofo ny fifanarahana findramam-bola dia tsy hafa noho ny mahazatra ny fitsipiky ny porofo izay mifehy ny lalàn'ny fifanarahana. Ny hany azo atao afa-tsy ny fahafaha-mamita fanaovan-moraly Izany dia ny andraikitry ny olona iray izay avails ny tenany ny vonona ny hanome ny porofo, indrindra fa ny amin'ny momba ny fisian'ny adidy ny famaranana ny fifanarahana sy ny toetra ny misambo-bola ho an'ny olona iray izay raha ny marina nindramina.
Ny fanoratana ho takiana, miaraka amin'ny fanaterana ny vola.
Ny vonona ampiasaina manana toetra miavaka mahasondriana ananan'izy ny haavon'ny ny fanatanterahana izany satria dia samirery fifanekena (ny lanjany ihany ny misambo-bola). Na izany aza, mampisambotra tsy mpitrosa ny adidy ny misambo-bola, ny fanaterana ny zavatra dia tsy ny adidy. Na izany aza, dia misy toe-javatra izay mampisambotra mety ho mpitrosa amin'ny adidy ny misambo-bola, ohatra, nandritra ny hetsika iray indray manimba nijaly noho ny tsy lazaina intsony ny momba ny zavatra. Ara-poto-kevitra, tsy misy adidy mba mampisambotra ao amin'ny fifanarahana. Fa ny fitsipika mikasika ny madio mety ho atsangana Izany no zava-misy, ohatra, rehefa ratsy dia nijaly noho ny iray izay mampiasa ny zavatra, ka mampisambotra nanao zavatra ratsy ny finoana. Mariho fa ny warranties manohitra miafina kilema dia efa tena ambany dia ambany ny mety ho ampiharina eo amin'ny sehatry ny vonona ampiasaina, raha mampisambotra ho an'ny fandaniana, ny fanoloran-tena al andraikitra dia mbola azo atao.
Ny correctionnalisation des heloka - DE LEGE LATA, ny Bilaogy Tompony RIBAUT-PASQUALINI
Ny correctionnalisation dia ny zava-misy ny mitsara ny heloka bevava, izay raha ny tokony ho izy ny assize Fitsarana, - piarenana FitsaranaNy correctionnalisation mpanao lalàna, raha ny mpanao lalàna dia nanapa-kevitra mba manambany ny heloka amin'ny maha heloka iray amin'ny alalan'ny fampihenana ny sazy, Ny correctionnalisation fitsarana, rehefa ny mpitsara(s) karazana(s) ny raharaha deforms(nt) an-tsitrapo ny zava-misy marina ny zava-misy, manamaivana. Izany no mba hanadino ny mampitombo ny toe-javatra, na ny isan-panorenana singa ny heloka bevava, na ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny cumulation ny fandikan-dalàna. Eny tokoa, tao ny fahaiza-manao ho toy ny hany mpihazona ny fahafahana ny fanenjehana, dia niakatra ho any aminy ny fandraisana an-tanana ny manao izany fanapahan-kevitra izany. Fa mariho fa ny fanadihadiana ny Mpitsara sy ny filankevitry ny fanabeazana dia mety ho fampaherezana ihany koa ny mampiasa ity dingana ity. Momba ny correctionnalisation ny lalàna, io no ampiasaina ho fohy-circuit ny mpitsara, izay matetika tsy ampoizina, indrindra fa ao ny raharaha heloka bevava ny filan'ny nofo izay tsy dia mahazatra ny mpitsara mba hanapa-kevitra manohana ny fanafahana. Noho izany, mampiasa ny correctionnalisation miantoka fa ny olona meloka dia ho tsaraina amin'ny alalan'ny professional mpitsara izay dia tsy isalasalana fa ho hentitra kokoa (amin'ny saina rehetra ny teny) fa ny mpitsara malaza. Ho an'ny dia ny correctionnalisation ara-pitsarana tsy mamela ny clutter amin'ny Fitsarana assize Raha jerena ny isa ambony be ny heloka, izany dia marina tokoa fa ho sarotra ny rehetra ny fitsapana mialoha ny Fitsarana assizes. Izany no hany mba hahitana Raha izany no tena sampam-pianarana ny correctionnaliser heloka toa tena tsy ara-drariny ho an'ny niharam-boina ny heloka izay maniry ny mba hahita ny hiseho eo anatrehan'ny Fitsarana ady heloka bevava, ny fampiharana ity dingana ity dia afaka ny ho ilaina ao amin'ny toe-javatra izay ny niharam-boina ny tenany dia mety ho mahaliana: ny niharam-boina maniry mba hampihenana ny haino aman-jery ny fitsarana. Ny lalàn ny neu fmars antsoina hoe"Loi Perben II"dia avy amin'ny famerana ny mety ho sarotra ny correctionnalisation. Ao amin'ny fiantraikany, ny fihetsika manome fa raha ny antoko tsy fifandirana ny mahay ion fanitsiana nomena ny zava-misy nandritra ny ponenana ny torolalana, ireo antoko politika ireo dia tsy ho afaka ny hanao izany manoloana ny piarenana Fitsarana. Raha vao ny firesahana mialoha ny piarenana Fitsarana dia nanapa-kevitra avy amin'ny fanadihadiana ny Mpitsara na ny Efi-trano ny fampianarana, na ny antoko politika na ny fitsarana mihitsy, ny hany azo atao miantehitra amin'ny heloka bevava ny zava-misy. Misy maningana, anisan'izany rehefa niharam-boina no mandrafitra ny maha-pirenena ny antoko taorian'ny famaranana daty nanaovana ny fanambarana, dia ho afaka manangana tsy fahaizana ny fotoam-pitsarana ny fitsarana. Misy ny faharoa afa-tsy izany, dia raha ny mpitsara ny Fitsarana, dia nosamborina noho ny unintentional fandikan-dalàna, fa ny tsy hita ao amin'ny hazavana ny amin'ny adihevitra mikasika ny zava-misy no mpanao heloka bevava, satria iniana. Izany fomba fanao izany dia ny momba ny velona adihevitra Ny sasany hihevitra fa ireo no mandrafitra ny hevitry ny lalàna, ao anatin'izany ny andininy faha-efapolo ny ANJARA izay niafara tamin'ny denaturation ny heloka fanalam-baraka ny heloka bevava.
Ny hafa, na izany aza, ny mahita izany no ratsy satria io dia mifanipaka amin'ny isan-karazany ny fitsipi-ny tahirim-bola sy ny endrika: ireo fitsipika Ireo-ny filaminam-bahoaka, izay milaza fa ny antoko politika dia tsy mahazo derogate avy ireo fitsipika.
Ny bebe kokoa, ny fitsarana dia manamarina ex officio ny fahefana, satria ireo fitsipika midika ny invalidity ny fomba sy ny fanapahan-kevitra izay natao. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe ity dingana ity, dia ny correctionnalisation dia tsy ny maha-miasa trivialization ny maha zava-dratsy ny sasany zava-misy, mahay ny zava-misy ny heloka noho ny lalàna. Raha ny marina, ny mpanoratra ny heloka efa nahita ny fandikan-dalàna very eo ny fahasaro-po, ka ny didim-pitsarana izany dia apetraka dia voatery ho tsy mafy noho ny heloka bevava ny sazy.
Fomba ho an'ny fandroahana ny samy hafa rehetra - ny Fanontana-ny Lalàna
Ny tsy fahaizana no tsy fahadisoana
Ny mpampiasa izay mikasa ny handroaka mpiasa dia tsy maintsy manaja ny fomba ny fandroahana toy izao manaraka izao: Raha misy olona mametraka kely ny fandroahana noho ny antony ara-toekarena, maro ny antony mety hanamarinana ny fandroahana mpiasa: fandroahana dia fomba ny famaranana ny asa ny fifanarahana maharitra fifanarahana amin'ny fandraisana an-tanana ny mpampiasaMba ho manan-kery, ny famaranana dia tsy maintsy manaraka ny fomba izay miovaova araka ny tokotany ho an'ny fandroahana hampiharina. Inona avy ireo efatra antony lehibe mifandray amin'ny mpiasa sy izay mety manamarina ny fandroahana azy.
Ny fiampangana manohitra ny mpiasa dia tsy maintsy ho tena (izany hoe, hamarinina), ary izay lehibe ampy mba hanamarinana fandroahana.
Tahaka izany ihany koa ny fahafoizana ny toerana
Ny hadisoana na ny fanitsakitsahana ny benin na mitoka-monina dia mety tsy ho feo sy ny lehibe ny antony nahatonga ny fandroahana. Raha toa ka ny mpampiasa ny tany ny fitsipi-pifehezana, dia tsy maintsy midika fa izy dia voampanga ho nanao ny mpiasa, rehefa nanao diso. Ny mpiasa manao ratsy toy ny ela be toy ny tsy fanarahana ny torolalana na ny fitsipiky ny fitsipi-pifehezana, na hetsika fiarovana navoakan'ireo mpampiasa izany na mandany ny fitondran-tena tsy mendrika (ompa, herisetra, herisetra). Ny tsy fitandremana ny fandaharam-potoana, na ny fiarovana no etsy ankilany. Fandroahana tsy ho amin'ny fandaozana ny toerana dia ny fandroahana noho ny fitondran-tena.
Mba ho afaka manamarina ny fandroahana, ny fitondran-tena dia tsy maintsy ho efa zava-dehibe, lehibe.
Kely ny tsy fitandremana, mahasoa, mety manamarina ny fampitandremana fa tsy ny fandroahana azy, afa-tsy raha toa izany no miverimberina imbetsaka na dia eo aza ny injunctions ny mpampiasa. Sokajy telo ny fitondran-tena mety manamarina ny fandroahana. Zava-dehibe: dia ny mpitsara izay mankasitraka ny maha zava-dehibe ny tsiny. Ny mpampiasa mety tsara mangataka lehibe tsiny sy hahita izany reclassified toy ny olon-tsotra noho ny tsy firaharahiana ny mpitsara. Izany dia ampy mba hanamarinana ny maha fandroahana. Ny mpiasa manatanteraka ny ny filazana. Izy mijery ny famaranana indemnity sy ny onitra amin'ny solon'ny karama handao fa izy dia tsy afaka ny handray ny tantaran ny niaingany avy amin'ny orinasa. Izany dia manamarina avy hatrany ny fialan'ny ny mpiasa izy no tsy mandeha ny filazana. Izy no tsy mandray ny famaranana mandoa, dia mitana, na izany aza, ny onitra amin'ny solon'ny karama hiala. Ny ambony indrindra eo amin'ny sehatra goavana. Izany tsiny dia ny finiavana hanimba ny mpiasa eo amin'ny fanajana ny raharaham-barotra. Ny mpiasa tsy an-tsoratra. Tsy manangona ny severance mandoa, fa mitana ny na ny karama amin'ny solon'ny karama hiala. Na dia ao ny raharaha ny fandroahana ho an'ny lehibe sy ny ota na ny tsirambina lehibe, ny mpampiasa dia tsy maintsy manaraka ny fandroahana ny fomba fiasa. Ny unfitness ny mpiasa sy ny toerana dia mety ho hita ihany ny asa dokotera. Dokotera ny fitsaboana ny mpiasa, na ny filan-kevitra ara-pitsaboana ny fiahiana ara-tsosialy dia tsy afaka. Ny mpiasa dia mety ho voaroaka noho ny kilema ho toy ny fotoana izany dia tsy mety ny bodoy ny lahatsoratra sy ny mpampiasa dia tsy misy hafa amin'ny asa mifanaraka amin'ny fahaiza-manao ara-batana mba soso-kevitra ho azy. Ny lalàna momba ny asan ny fahavalo aogositra dia tena nanova ny fomba ny fandroahana noho ny kilema. Talohan'ny taona, dia ilaina ny manavaka ny karazana roa fandroahana noho ny kilema: janoary taona, ny vaovao fomba mahazatra ny roa hypotheses. Ny mampiavaka ny fomba voalaza etsy ambony, miampy ny fitsidihana ny arak'asa dokotera mba jereo ny kilema (fa tsy roa teo aloha), ny fitadiavana vahaolana ny reclassification talohan'ny fandroahana ny mpiasa mendrika sy fakan-kevitra ny mpiasa ny solontenan'ny (toy ny kilema ho arak'asa amin'ny fiaviana na tsia). Ny mpiasa voaroaka noho ny kilema, tsy mahita. Izy mijery ny vola, ny fanalan-karama sy ny karama amin'ny solon'ny karama hiala. Ny aretina tsy mety manamarina ny fandroahana mpiasa. Io no handrafitra ny fanavakavahana amin'ny antony ny ny toe-pahasalamana sy ny fanalan-tononina noho izany antony izany dia ho foana. Etsy ankilany, ny tsy fisian'ny ny mpiasa (raha miverimberina ny tsy fahatongavan'ny fohy na antonony teny na iray maharitra ny tsy fisian'ny) mety hanakorontana ny asa ny asa fanompoana an'ny mpiasa. Izany disorganization, ary io irery ihany, mety afaka manamarina ny fandroahana. Mbola tsy izany no ilaina fa ny mpampiasa dia manohana ny singa io fandaminana indray ary izany dia manamarina ny mila maharitra handresentsika ny mpiasa izay tsy eo. Satria raha ny maharitra fanoloana ny mpiasa dia tsy manan-danja, ny fandroahana dia tsy hamarinina. Ny saina Raha ny mpiasa dia tsy manaraka ny loza amin'ny asa, na amin'ny asa aretina, ny fitsipika manokana ilaina. Ny mpiasa izay voaroaka fa miverimberina tsy teo na maharitra ny aretina mahafantatra ny fanalan-karama sy ny karama amin'ny solon'ny karama hiala. Raha tsy ratsy ny niniana fikasana ny mpiasa, ny tsy fahaizana no tsy anisan'ny tsy tsiny.
Ny mpiasa fotsiny tsy manana ny fahaiza-manao na ny fepetra takiana mba manao araka ny tokony ho izy ny asa nankinina taminy.
Ny mpampiasa dia tsy afaka fotsiny ny milaza fa, any ny fanalan-taratasy, ny tsy fahaizana mba mitaky ny famaranana ny fifanarahana. Mila ny fanohanana marina ny zava-misy sy hamarinina fa dia mampiseho ny fomba ny mpiasa tsy eo ny haavon'ny toerana sy ny tanjona izay nankinina taminy. Izany ihany koa ny raharaha raha toa ka, amin'ny fanohanany ny fandroahana, ny mpampiasa dia niantehitra tamin ny tsy fifankahazoan-kevitra eo amin'ny mpiara-miasa aminy. Ny manokana ny zava-misy sy hamarinina eto ihany koa ny ilaina. Ny mpiasa dia faranana ho tsy mahafa-po ny matihanina manao ny ny filazana.
Izy mijery ny vola, ny fanalan-karama sy ny karama amin'ny solon'ny karama hiala.
Ity tany noho ny fandroahana tsy ho sahiran-tsaina miaraka amin'ny tsy fahaizana (jereo etsy ambony). Izany tsarilasitra no matetika lazaina mikasika ny ara-barotra ekipa, izay tsy maintsy hihaona ny quotas ny varotra na ny mba hahazoana ny quantified tanjona manokana. Amin'ny tenany, ny tsy zava-bita ny tanjona voatendry ny mpiasa dia tsy ampy hanamarinana ny fandroahana. Ny mpitsara maso roa singa manan-danja: Ny mpiasa voaroaka noho ny tsy fahampian'ny ny vokatra manao ny filazana. Izy mijery ny vola, ny fanalan-karama sy ny karama amin'ny solon'ny karama hiala. Ny taha ny famandrihana eo amin'ny fivarotana an-tserasera dia azo antoka fa tsy mba hampitombo ny fanavaozana isan-taona. Ny fangatahana fisoratana anarana efa nentina ho any ny kaonty. Ianao dia mandray isam-bolana amin'ny alalan'ny mailaka ny lahatsoratra vaovao sy ny olana izay manokatra ny fidirana. Afaka na oviana na oviana unsubscribe amin'ny alalan'ny fanindriana ny rohy"enga anie mba unsubscribe"eo amin'ny farany ambany amin'ny mailaka.
Ginevra - Annunci e piccoli annunci gratuiti: comprare e vendere
CHF isam-bolana, fara fahakeliny, ny enim-bolana
Fanarenana ny lease Akaiky Lehibe ny trano ny momba ny metatra tora-droa ao amin'ny rihana faha, izay ahitana ny fidirana ao amin'ny efitrano, ny efitra fandraisam-bahiny amin'ny kely lavarangana (jerena ny rano fiaramanidina), ny efitra fatoriana, ny lakozia misokatra ho efitra fisakafoana sy ny anaohofan-trano, ny toerana lehibe ny asa raikitra ao amin'ny tahala amin'ny fomba fijery miavaka, ny ZIMEYSA (Faritra Indostrialy, Meyrin Satigny).
LUNIC, ny fifandraisana fahafahana misafidy, mihevitra indray ny tontolon'ny asa sy ny tolotra telo anjara fanompoana (m, m sy m) ny zana-lease.
Nohavaozina tamin'ny volana jona.
Trano tao ambony rihana miaraka amin'ny lavarangana
Ny trano dia ahitana ny lakozia tsy ampy fitaovana (afa-tsy ny vata fampangatsiahana), tapa-ho velona, ny lalantsara sy ny efitrano. Riceverà ogni giorno un e-mail con tutte le nuove offerte di questo hoy i tipo isaky ny telo mesi o fino a quando non cancellerà ny ordine di ricerca.
Ny lalàna mafy manam-pahaizana manokana ao amin'ny fiantohana ny Fiarovana ny insureds sy ny niharam-boina
Rehefa mihoatra noho ny roa-polo taona no miady ny fiantohana ny orinasa, tonga ny fotoana mba hametraka ny tranonkala natokana ho an'ny fiarovana ny olona sy ny madinika sy salantsalany hivoaka, ary ny niharam-boina ny misadventures ny fiantohana sy ny andraikitraToerana io dia ahitana ny hametraka ny fandalinana ny toe-javatra sy ny fifandirana eo anivon' ny mahazatra indrindra manohitra ny olona na ny madinika sy salantsalany hivoaka ny mpiantoka, na ny mpanohitra ny isan'andro ao amin'ny faritra ny andraikitra. Amin'ny toe-javatra maro izay aho tsy maintsy miatrika izany, ny afo, ny rano fahavoazana, tafio-drivotra, burglary, mihazona ny-ny, lozam-pifamoivoizana, ny ratra manokana sy ny hafa fiantohana ny olona, nitarika ahy mba mahalala ny tanjany sy ny fahalemeny ny mpiantoka, ary indrindra ny fomba mba hamonjy ny toe-javatra famoizam-po indraindray ny sasany ny mpanjifa amin'ny fahoriana. Ny lohahevitra tsirairay dia ahitana ihany koa ny sasany maimaim-poana momba ny fanehoana ny fihetseham-po sy ny fomba fomba fiasa ny foto-kevitra. Ny governemanta HANALA tonian-dahatsoratra ao amin'ny toerana namaly maimaim-poana amin'ny alalan'ny e-mail na ny fakan-kevitra amin'ny alalan'ny famenoana avy ny endriky ny ambany Raha toa Ny raharaha mametraka fanontaniana ny fitsipika momba ny fiarovana azo antoka fa ianao amin'ny olana ara-bola ny orinasa dia manaiky amin'ny raharaha amin'ny raharaha fototra mba hamaly miavaka ny toe-piainana.
Ny lahatahiry Mpisolovava - Hahita ny mpahay lalàna ao Frantsa
Ny taha ny mpampanoa lalàna dia maimaim-poana tanteraka
Laha-tahiry ny Mpisolovava momba ny mpisolovava maro Mila valiny mivantana Mba hahatonga ny fikarohana mora kokoa, ireo mpahay lalàna ireo dia nandamina ny faritra ny fahaizana sy ny faritra ao amin'ny lahatahiryNoho ny tsara ny fepetra fikarohana, ny laha-Tahiry ny mpahay lalàna mamela ny tsirairay amintsika ny hahita ny tsara mpisolovava, izany hoe, iray, izay mifanaraka tsara anao noho ny fikarohana manokana ary multi-fepetra. Ny toerana dia afaka manampy anao mba hisafidy ny tsara ny mpahay lalàna, izany hoe, ny olona izay tiany anao tsara indrindra eo amin'ny lafiny fahaiza-manao, ny fisian'ny, ny vidiny sy ny fomba fandidiana, amin'ny ankapobeny. Nandritra ny fizahan-toetra ny ambany ny maha-zava-dehibe ny faritra akaiky ny mpisolovava no zava-dehibe noho ianao, dia ho afaka hihaona mora kokoa, ary ianao dia tsy mila ny handoa ny vola lany amin'ny fitaterana zava-dehibe. Mifanohitra amin'izany kosa, raha ny ara-bola ny tsatòka dia manan-danja, ny vola lany sy ny travel fotoana dia ho kely ihany ny fiantraikany eo amin'ny saram-pianarana. Noho izany, dia tsara kokoa amin'ny toe-javatra ity mba hahazo mpisolovava izay tiany ny zavatra tsara indrindra, na dia lavitra.
Ao amin'ny fanajana ny fangatahana ho an'ny fakan-kevitra ara-dalàna na toro-hevitra, toy ny lavitra dia mbola tsy.
Amin'ity tranga ity, dia tsara kokoa mba haka mpisolovava izay mahatakatra ny raharaha, na dia lavitra anao. Rehetra ny mpanjifa no tsy maintsy toy izany koa mila ny fisian'ny ny anisan'ny mpahay lalàna. Misy, ohatra, ny mpanjifa antso tena matetika ny mpisolovava ny"hijanona abreast", ny hafa kosa dia afa-po amin'ny Mailaka, ary manantena fa ny mpisolovava ampahafantarin'andriamanitra azy ireo rehefa misy izany hetsika miseho ao amin'ny fampirimana. Ny saina, ny billing ny mpisolovava dia matetika vita amin'ny fotoana lany ny rakitra, ary raha mampihatra be loatra ny mpisolovava miantso matetika, dia mety hampitombo ny saram fa izany dia mampianiana anareo. Ho niaro, dia zava-dehibe ho ao amin'ny fifandraisana ny matokia mba ho afaka ny hanazava ny isan-karazany intricacies ny raharaha. Ohatra, dia tsy ilaina hoe mpahay lalàna fa fantatrao misakana anao nanazava tamim-pahatoniana ny toe-javatra rehetra. Amin'ny toe-javatra toy izany, dia tsara kokoa ny mifidy ny mahay ny mpisolovava fa tsy fantatrao, ary izay afaka mampiharihary rehetra ny fifandirana. Izy ireo mety miovaova ireo dia tsy voatery ho taratry ny fahaiza-manao any an-tsaha fa mitady.
Ohatra, ny mpahay lalàna fa dia tena tonga tao amin'ny haino aman-jery dia hahatonga anao handoavana ny laza sy ny tsy voatery ho ny fahaizany.
Indrindra mpisolovava manana ny tahan'ny isan'ora izy dia miovaova araka ny karazana rakitra sy ny fahasarotan'ny raharaha. Ny tahan'ny isan'ora fa miovaova be (teo anelanelan'ny taona sy valo cents ny). Na izany aza, ny vidiny"ara-dalàna"dia raha ny marina eo amin'ny sy ny. Ny tombony ny pricing faritra dia nisy ambaratonga ny mangarahara (foto-kevitra ny mpisolovava mba ho afaka manamarina ny fotoana lany amin'ny rakitra) fa afaka manasarotra ny tombany misahana ny mpanjifa.
Fomba iray hafa ny fikajiana ny saran'ny dia ny karama fonosana, izay fialana amin'ny tsy mahafinaritra tsy ampoizina.
Ohatra, ny fisaraham-panambadiana ny fifandirana mety haharitra taona maro, ary raha efa nifidy ny fanompoana fonosana, ny saram-ny mpahay lalàna dia manana ny ambony indrindra tapa-kevitra mialoha. Raha ny mpahay lalàna ny sara dia kajiana amin'ny fonosana, dia zava-dehibe mba hahafahana izany fa misy ny fonosana mba hialana amin'ny tsy ampoizina. Ny fanampiana ara-dalàna dia fitaovana izay napetraky ny Fanjakana, ary izay mamela, iharan'ny fepetra ny loharanon-karena, fa ny Fanjakana dia mety mandoa ny saram-pianarana ny mpisolovava. Ity rafitra ity dia afaka ho tena mahasoa, ary raha azo atao, dia tokony tsy misalasala mampiasa izany. Na izany aza, ny mpisolovava rehetra tsy manaiky ny fanampiana ara-dalàna, ary noho izany dia mety hanontany ny mpahay lalàna izy raha manaiky izany. Ny mpisolovava sasany tsy mety manaiky ny fanampiana ara-dalàna, satria izy ireo dia mihevitra fa ny fandaharam-potoana napetraky ny Fanjakana dia ambany loatra.
Izany dia mora ny manova ny mpisolovava satria ny fitsipi professional fitondran-tena izay mifehy ny fifandraisana eo amin'ny mpisolovava manao izany mora.
Mba hitandrina ampitiavana ny fifandraisana tamin'ny mpisolovavany, dia tsara ny mampahafantatra ny mpisolovava fa tsy te-hiasa miaraka aminy, fa koa nahoana ianao no tsy te kokoa dia ny manova ny mpisolovava satria ny fitsipi professional fitondran-tena izay mifehy ny fifandraisana eo mafy ny mpisolovava manao izany mora.
Mba hitandrina ampitiavana ny fifandraisana tamin'ny mpisolovavany, dia tsara ny mampahafantatra ny mpisolovava fa tsy te-hiasa miaraka aminy, fa koa nahoana ianao no tsy te-hiasa aminy.
Rehefa nandoa ny saram, afaka mandeha ho iray hevitra amin'ny vaovao ny mpisolovava, ny farany dia hikarakara ny fampitana ny antontan-taratasy. Ho mailo, satria maro ny fomba fiasa, ny antontan-taratasy dia tsy avy lasa mpisolovava mba mpahay lalàna, ary ianao dia tsy ho afaka ny"hahazo ny laha-tahiry". Ny fiovana ny torohevitra no tsy sarotra Na izany aza, dia tsy tokony hanararaotra izany fahafahana manova ny mpampanoa lalàna, ary tsy boky io safidy io raha toa ianao tena tsy faly amin'ny mpisolovava. Ny vaovao mpahay lalàna dia tsy maintsy mamerina ny raharaha rehetra, ary dia fotoana izany dia vokatry ny ao ambony saram. Izao fa anao hahafantatra bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny ny asa izany, amin'izao dia afaka misafidy serenely teo anivon ny mpahay lalàna voasoratra ao amin'ny tranonkala.
Revenu Quebec - Fepetra fiarovana ny fananana ara-tsaina zon'ny
Ny Internet toerana Revenu Québec dia natao ho an'ny fampiasana manokana, afa-tsy ho an'ny fanabeazana na tanjona vaovao Tokony, na izany aza, ho ampiasaina eo ambany ny teny ao amin'ny fahazoan-dàlana CC BY-NC CA ity rohy Ity dia hanokatra ny vaovao vakizoroNy famantarana ny Revenu Quebec tsy maintsy, na izany aza, azo ampiasaina araka ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana CC BY-NC-ND. CA ity rohy Ity dia hanokatra ny vaovao vakizoro Raha tsy manokana fifanarahana efa natao tamin'ny Revenu Quebec city, rohy tokony tsy soso-kevitra, na maneho fa ny fikambanana dia mifandray amin'ny fomba rehetra, na inona na inona ny Tranonkala hafa toerana, na izay manana nekena ny afa-po. Revenu Quebec tahirin ny zo mitaky, amin'ny fotoana rehetra, fanesorana ny misy toy izany ny rohy misy Web site Ombieny ombieny, ity tranonkala ity dia mety hanome fampahalalana any ivelany Tranonkala (mpikambana ao amin'ny antoko fahatelo) na mampiditra fitaovana toy izany toerana.
Ny fikambanana disclaims misy madio momba ny fenitra momba ny fiarovana ireo toerana, ary ny marina ny vaovao hita ao aminy, izay mety efa naorina ao amin'ny toerana ity. Satria izy dia tsy tomponandraikitra ho an'ny toerana ireo, dia tsy manohana ny votoaty, na ny vokatra sy ny tolotra izay no nanatitra. Revenu Quebec mahatonga tsy solontena ary dia manome tsy misy fiantohana, na inona na inona, eo amin'ny website, anisan'izany ny fitaovana, teny sy boky izay mirakitra izany, araka ny vaovao fandaharana. Tsy misy famerana ny generality ny voalaza teo ambony, Revenu Quebec afaka manome antoka fa ny toerana dia miasa amin'ny fotoana rehetra nisesy, na izay dia tsy nisy olana. Revenu Quebec afaka manome antoka fa ny fanazavana hita ao amin'ny Internet toerana maka ho any ny kaonty, amin'ny fotoana rehetra, ny farany hetra fiovana. Amin'io lafiny io, dia ny filoha am-perinasa eo aminareo mba hamaky ny fanamarihana sy ny fampitandremana toy izany koa ny anarana hafa, raha azo atao. Ankoatra izany, ao ny zava-nitranga ny fitoviam-pijery eo amin'ny fomba ofisialy ny lahatsoratra sy ny afa-po ny toerana, ny ofisialy ny lahatsoratra dia tiana mihoatra noho ny farany. Revenu Quebec tsy azo natao mendrika ny misy fahasimbana, mivantana na ankolaka, lazaina ho ny fampiasana ny Aterineto toerana. Ny andraikitra voafetra ny Revenu Quebec momba ny, inter alia, ny mety ho fahavoazana manaraka ireto (na raha toa ny fikambanana dia mazava nanoro hevitra ny mety ho).
Mpisolovava misahana ny raharaha ara-toekarena - ny fiarovana ny zo ny niharam-boina
Ny tena tanjon ny niharam-boina ny heloka dia ny onitra noho ny fahasimban'ny amin'ny ny amin'izay ho lany ny olona izay nahavita heloka bevava
Ny fomba ny ponenana ny fanelanelanana sy ny litigation tsy hamela ny tena matetika mba hamerenana amin'ny laoniny ny zo sy ny tombontsoa ara-dalàna ny niharam-boina satria fa ny heloka bevava efa nanao ny alalan ny orinasa efijery na ny ara-dalàna ny vokatry ny heloka bevava.
Amin'ny toe-javatra ity ny fiarovana ny zon'ireo niharam-boina dia tsy azo atao afa-tsy iray tokan-tena dia midika hoe ny fanokafana ny raharahan-keloka bevava sy hanombohana ny hetsika sivily any amin'ny fitsarana heloka bevava manohitra ny heloka bevava. Rehefa nanomboka ny hetsika sivily any amin'ny fitsarana heloka bevava, ny tanjona voalohany ny niharam-boina no tokony handray ny fepetra hamantarana sy hitandrina ny nangalatra ny entana na fananana hafa ny fanenjehana noho ny heloka bevava izay ny filazana ny niharam-boina dia ho nihaona. Amin'ity tranga ity, ny mpisolovava misahana ny raharaha ara-toekarena dia tsy maintsy manaiky ny naman'ny fiangonana ny milaza fa ny fitsarana momba ny fananan ny miahiahy na ny voampanga. Lalàna momba ny heloka bevava dia manampy mba hiantohana ny hetsika sivily ny heloka bevava ny fitsarana, noho ny fakana an-keriny ny fananan ny miahiahy sy ny voampanga. Mifanaraka amin'ny andininy faha- ny lalàm-Panorenana ao amin'ny Federasiona rosiana ny zon'ireo niharam-boina dia ny alalan ny lalàna, ny fanjakana no miantoka ny fidirana any amin'ny fitsarana sy ny onitra. Araka izany fanomezana lalàm-panorenana anjara ny andininy faha- ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny fitsipiky ny paika ady heloka bevava ao amin'ny Federasiona rosiana manome, fa izany no miantoka ny niharam-boina ny onitra vokatry ny heloka bevava, ary ny andininy faha- ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny fitsipiky ny paika ady heloka bevava ao amin'ny Federasiona rosiana nanangana ny halehiben'ny ny heloka bevava fomba ao amin'ny endriky ny ny fakana an-keriny ny fananany. ny art. ny Fehezan-dalàna momba ny lalànan'ny heloka bevava fomba federasiona rosiana tamin'ny antoka ny fanatanterahana ny didim-pitsarana momba ny hetsika sivily, ny naman'ny fiangonana amin'ny fifanarahana amin'ny lohan'ny vatana nanontany manomboka amin'ny fitsarana ny fangatahana ny fakana an-keriny ny fananan ny olona ahiana, ny voampanga na ny olona izay mijoro ara-nofo ny andraikitra noho ny asa.
Noho izany, ny halehiben'ny ny fanerena dia natao mba hiantohana ny fanatanterahana ny didim-pitsarana momba ny hetsika sivily, sy ny androbe, sy ny famerenana amin'ny laoniny ny fananana, ny vola na ny hafa fananana azo na voaray tamin'ny fomba heloka bevava ny ara-dalàna ny tompony, ary koa ny ny fiarovana ny ara-dalàna mahaliana ny olona izay fantatra amin'ny tranga toy ny niharam-boina na ny sivily ny antoko. Mifanaraka amin'ny p ny art.
ny Fehezan-dalàna momba ny lalànan'ny heloka bevava fomba ny FR eo ny raharaha fakana an-keriny ny vola na ny fananan'ny hafa izay isan ny ahiahiana, voampanga, ary izay ao amin'ny kaonty, petra-bola, na ny banky sy ny hafa carte andrim-panjakana, ny fifanakalozana eo izany tantara izany dia mihantona tanteraka na amin'ny ampahany ao anatin'ny faritry ny vola na ny fananan'ny hafa nosamborin'ny.
Noho izany, ny lalàna momba ny lalànan'ny heloka bevava fomba miaiky ny mety ny fakana an-keriny ny vola ao amin'ny kaonty amin'ny banky ary ny hafa carte andrim-panjakana. Mifanaraka amin'ny p ny art. ny Fehezan-dalàna momba ny fitsipiky ny paika ady heloka bevava, ny entana izay ao amin 'ny zara-tany ny olona hafa mety ho nosamborin'ny raha misy antony ampy mba hinoantsika, fa izy ireo dia nahazo ny vokatry ny heloka bevava fihetsik' ireo ahiahiana, voampanga. Raha toa ka efa nahazo ny maro fitsarana fanelanelanana, fa tsy afaka mandoa trosa, dia jereo ny Mpisolovava ny Birao, ary izany dia azo atao fa izy no mpisolovava iray, ny raharaha ara-toekarena manamboninahitra ilainao.
Ny fahafatesana sy ny loza ny lalana: mahalala ny zava-drehetra
Rehefa maty ny olona vokatry ny lozam-pifamoivoizana, ny ara-dalàna izay ho mpandimby azy dia mety hahazo onitra nijaly noho ny fahavoazana (manimba patrimonial sy ny fanampiny-patrimonial)Ny fianakavian'ilay niharam-boina ny lozam-pifamoivoizana mety hahazo onitra noho ny fahasimban'ny nijaly. Izany no ilaina fa ny fianakaviana voakasika mety efa mafy fatorana ny maty niharam-boina. Ireo mpikambana rehetra ao amin'ny fianakaviana no tsy manana ny zo hahazo onitra. Ho onitra, tsy ilaina mba hanaporofoana ny mpitsara iray fa rohy mahery nisy (ny fiaraha-monina ny fiainana, ohatra). Amin'ny ankapobeny, ny zo mpihazona ny ray aman-dreny, na ny ankizy. Koa azo heverina ho toy ny zo-mpihazona ny olona izay tsy nanana ra fifandraisana amin'ny maty niharam-boina, fa niresaka ny fihetseham-po fifandraisana manan-danja. Hatramin'ny taona, ny nomenclature Dintilhac mamaritra sy manasokajy ny singa samihafa ny fahavoazana mivantana ireo tra-boina sy tsy mivantana ny raharaha ny fahafatesana noho ny loza. Ny voka-dratsy ny lova dia ahitana isan-karazany ny fahavoazana, anisan'izany ny fandevenana ny fandaniana sy ny isan-karazany ny vola lany mifandray amin'ny fahafatesana. Manisy ratsy ny fanampiny-patrimonial dia ahitana karazany telo ny ratra. Misy telo toy izany ny ratsy ara-môraly toetra amam-panahy, ny lanja ny ara-pihetseham-po sy ara-tsaina ny fahafatesana ny niharam-boina ny loza: Ny fahavoazana rakotra fanaovam-panavotana, izay midika hoe ny fahavoazana mianjady amin'ny ny havany eo amin'ny fotoana ny loza sy ny fahafatesana ny niharam-boina, izany hoe, nandritra ny aretina na ny zava-ratra. Ohatra: ny olona dia ny niharam-boina ny lozam-pifamoivoizana ho faty amin'ny faran'ny isam-bolana ny hopitaly. Manana miaraka amin'ny fanaintainana izany olona izany ny fahafatesana am-pandriana. roa ho very ny fitiavana, fantatra ihany koa ho toy ny"ratra ara-maoraly"dia midika hoe"maneno ny pathological dia nanaporofo fa ny fahafatesany dia mety hiafara amin'ny sasany ireo olon-tianao."telo Ny fahaverezan'ny fahafahana ny fahavelomana, dia zo ny niharam-boina, izay, ao ny raharaha ny fahafatesana, dia nandroso ho any amin'ny mpandova. Ao ny zava-nitranga ny fahafatesan'i ny niharam-boina, izay nandimby azy koa izany dia tsy maintsy mikatsaka ny onitra avy amin'ny fiantohana ny olona izay tompon'andraikitra amin'ny loza sy ny fahafatesana ny niharam-boina.
Ny tolo-kevitry ny fanonerana nataon 'ny insurer mety azo heverina ny tsy fahampian' ny zo-ny mpihazona.
Miaraka amin'ny fanampian'ny ny mpahay lalàna, ny mpihazona ny zo afaka hanohy ny tompon'andraikitra eo anoloan'ny Tribonaly de Grande Instance. Ny vanim-potoana ny tsy fahatanterahana dia ny telo taona Midika izany fa heloka bevava ny fitsarana dia afaka mandray toerana na oviana na oviana ao anatin'ny telo taona taorian'ny loza sy ny fandikàna. Ny fanadihadiana dia natao mba hijery ny voka-dratsy sy ny fihetseham-po fatorana izay nisy teo amin'ny niharam-boina efa nodimandry, sy ny mpandimby azy. Izany dia heloka bevava, ny olona miandraikitra ny loza Dia niakatra ho any amin'ny mpampanoa lalàna mba hanapa-kevitra raha ny fitoriana dia manana ny rariny na tsia.
Raha manapa-kevitra ny mpampanoa lalàna mba hanenjehana ireo tompon'andraikitra ny loza, ny mpihazona ny zo mety ho anjara-monim-pirenena eo anoloan ny Fitsaran de grande instance. Dia izany fomba izany izy ireo dia ho onitra noho ny ratsy natao Ny toetry ny fahavoazana nijaly ary ny vola ho fanonerana dia ho raikitra ny mpitsara.
Jurifiable azo antoka torohevitra araka ny lalàna, ary avy hatrany. Mahita ny mpisolovava amin'ny fandrefesana, mampitaha ny fakan-teny.
Ny zom-pirenena italiana
Ny Fitsarana Tampony des assation, dia ny loka n, izany dia nanapa-kevitra fa izy ireo dia italiana saussi ny taranak lafemme italiana izay nanambady uncitoyen any ivelany, hanan-kery ny lalàna n °ny, dia, noho izany, tsy manana ny zom-pirenena(ny zom-pirenena) italiana nepar ny fanambadiana, dia manana ny zo sy ny fanekena ny maha-olom-pirenena italiana neavec ny fomba alohan'ny lestribunaux lalàna iraisana, ampian'ny torohevitra. Ny fampiharana ny filan-kevitry ny spermet-panjakana ny raharaha, amin'ny alalan'ny fandefasana ny mpisolovava ny antontan-taratasy ilaina. Mandritra izany fotoana izany dia afaka ihany koa, mangataka ny sambo teny. Mpisolovava e mafy tao Roma.
Tranomaizina, rehetra iombonana
Mitovy dika teny fa tsy mitovy ny dikany araka ny teny hafa, na ny dikany dia saika mitovy. Rehefa mampiasa teny mitovy hevitra, ny didim-pitsarana dia tsy manova ny heviny. Ny teny bisikileta ireo mba ho heverina ho toy ny mitovy dika ny bisikileta Ady sy fifamaliana, dia teny mitovy hevitra. Ho tia sy mba ho fitiavana, dia ny teny malagasy Ny tahotra sy ny tebiteby dia roa ny teny mitovy hevitra izay mety ho hita ao anaty aterineto ity thesaurusNy thesaurus mamela anao hahita teny mety kokoa ny toe-draharaha noho ireo izay ampiasaina tsitrapo. Izany koa dia mamela anao hahita teny tena sahaza mba hamerina ny toetra, ny tanjona, ny asa, sns, ny zavatra, ny hoe, ny asa ao amin'ny fanontaniana. Farany, ny rakibolana ny teny mitovy hevitra manampy hisorohana ny famerimberenana ny teny ao amin ny soratra mba hanatsarana ny fomba fanoratra.
Handrava ny tompony, usufruct ary niteraka tompony
Ny tompon'ny fananana azo partitioned eo amin'ny usufruct ary niteraka ny fananan ny hafa. Misy dismemberment ny fananany
raha ny tompon'ny iray.
Revenu Quebec - hetra Refund
Apitireihana Nama Lyonnais: whakatuwheratanga o te tamataraa o Bernard Tapie mō te 'scam'